SARIPIKA: Tondra-drano Nandritra ny Krismasy Tao Karaiba Atsinanana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Janoary 2014 17:37 GMT
Andro mialoha ny Krismasy, vondro-nosy maromaro tao Karaiba Atsinanana, tahaka an'i Dominika, Santa-Lucia, Saint-Vincent sy Grenadines, no niharan'ny tafio-drifotra izay niafara tamin'ny rotsak'orana naharitra ora maromaro, sy tondra-drano goavana ka am-polony mahery ireo namoy ny ainy.
Maro ireo olona voafandrika sy tafahitsoka satria mbola tao anatin'ny fanomanana minitra farany amin'ny fankalazana ny krismasy.
Saint Lucia, izay mbola tsy tafarina akory tamin'ny tafio-drivotra Tomas tamin'ny 2010 dia niharan'ny tondra-drano goavana sy fahasimbana tetezana maromaro tao atsimo-atsinanan'ny vondro-nosy, ka nampitoka-monina ireo tanànakely sasantsany. Farafahakeliny dimy no fantatra fa maty ka polisy manam-pahefana no iray tamin'izany izay namoy ny ainy teo am-panatontosana asa fanavotana.
Nihotsaka ny lalana Anse Ger tao Saint Lucia
Fiantsonana ao amin'ny Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Hewanorra ao Vieux Fort, Saint Lucia
Tao amin'ny vondrona an-tserasera St. Lucians Aiming for Progress (St. Lucia Mikendry Fampandrosoana), olona maro, indrindra ny avy amin'ny am-pielezana no nikarakara hetsika fanampiana hoan'ireo niharam-boina. Maro ireo nanontany mikasika ny fampahafantarana hoan'ny vahoaka (na ny tsy fisian'izany) navoakan'ny Sampan-draharaham-pirenena misahana ny Vonjy Taitra sy ny Biraon'ny Sampana Famantarana ny Toetr'andro talohan'ny tafio-drivotra.
Nitsikera mafy ny fitantanana ny vonjy taitra tao Saint Lucia i Wayne Vitalis
Nolavin'ny Biraon'ny Famantarana Toetr'andro ao Martinika ny tsy fandehanan'ny radara; Nolavin'ny Biraon'ny Famantarana Toetr'andro ao St. Lucia ny tsy fahatomombanan'ny radara….Saingy nolavin'ireo mponina tao St.Lucia ny tsy fahaizana. Tsy afaka hanampy antsika amin'izany ny Tompo! Tokony hamaly izay nolazainy tamin'ny firenena ny NEMO, tsy lazaina intsony ny tsy fahombiazana/sy ny tsy fanarahana ny torolalana sy ny tsy fisian'ny fandrindrana ny valin'ny nataon'ny firenena manoloana ny voina.
Manontany i Ananias Verneuil raha misy afaka manazava ny hoe tonga ivelan'ny vanim-potoanan'ny rivodoza ve (Jiona hatramin'ny Novambra) ity tafio-drivotra ity :
Raha ny hevitro, tonga taorian'ny vanim-potoanan'ny tafiodrivotra mahazatra ity zavatra ity ka heverina ho tsy rivodoza. Raha amin'izay fijery izay dia tratran'ny tsy nampoizina avokoa isika rehetra. Tamin'ny alalan'ity rotsak'orana betsaka tsy mahazavatra ity no tsy nahafaha-nanombana azy talohan'ny nirotsahany.
Namaly am-piesoesoana i Minerva Ward fa tsy rariny ny manantena ny sampan-draharahan'ny vonjy taitra (NEMO) hiasa mandritra ny vanim-potoanan'ny Krismasy:
Ankehitriny, hitako fa tsy rariny sady tafahoatra ny ataonareo manantena ny NEMO sy ny Biraon'ny Sampan-draharahan'ny Famantarana Toetr'andro hiasa ny andro alohan'ny Krismasy! Tsy fantatrao ve fa mikatona daholo ny zava-drehetra an'ny fanjakana mandritra ny herinandron'ny Krismasy. Nanantena ireo mpiasam-panjakana hiasa tokoa ve ianareo? Tokony mba nivoaka niantsena ny olona saingy tsy afaka noho ny fiakaran'ny rano. Nanantena be loatra ianareo! Ahoana raha hisasa amin'ny ranomasina ny firenena manontolo, Krismasy ny andro kanefa tsy fantatrao izay fandehan-javatrao eto St Lucia.
Nihevitra i Fred Walcott fa tsara raha fantarina izay nitranga tao amin'ireo vondro-nosy rahavavy mikasika ny fanairana na filazana loza momba ny tafiodrivotra:
Ahoana ny nataon'ireo vondro-nosy hafa? Nahazo fampilazana araka ny fotoana mety ve ry zareo? Niomana ve izy ireo? Inona no niseho (raha nisy) raha nahazo fampilazana mialoha araka ny tokony ho izy ry ireo? Tsy fikasana hanadio ny NEMO na tompon'andraikitra hafa amin'ny fanairana ny vahoaka akory izany. Raha nisy ny fampilazana ampy natao mialoha, mety resy lahatra hifindra toerana avoavo kokoa ireo olona ao amin'ny faritra mety hiharan'ny tondra-drano, mety nanala ny fitaovany saro-pady mety ho tratran'ny rano ary nandrakotra izany tamin'ny fitaovana tsy laitran'ny hamandoana, sns ireo orinasa. Tokony natomboka ireo fepetra fiarovana amin'ny loza. Tahaka ny vondro-nosy, tokony manana drafitrasa momba ny loza sy mampihatra ireo fepetra fisorohana ny loza ny sampan-draharaham-panjakana rehetra.
Tany malalaka ao amin'ny Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Hewanorra.
Lasan'ny rano ny tetezana Piaye tao Antsimo-avaratr'i Saint Lucia.
Anisan'ny lalana “Vieux Fort” nihotsaka, izay namboarina ho anisan'ny toby Amerikana tamin'ny taona 1940.
Tobi-dasantsy ao Bexon
Trano ao Bexon
Loza nateraky ny todra-drano tao Bexon
Nentin'ny rano ny Tetezana Canaries, anisan'ny lalambe ao amorontsiraka andrefan'i St Lucia.
Raha nisy tondra-drano tao Dominika, nosy nanambara-tena fa tompon'ny tany misy renirano 365, tsy nisy ny tatitra mikasika ireo niharam-boina. Na dia izany aza, notombanan'ny Praiminisitra Roosevelt Skerrit ho eo amin'ny EC45 tapitrisa dolara eo ny tetibidin'ny asa fanarenana.
Tetezana Elmshall ao Dominica
Tondra-drano ao Roseau, Dominika
Ranom-potaka ao Citronnier, Dominika
Arabe ao Dominika feno atsanga
Nilaza ny tatitra tany am-boalohany fa olona valo no namoy ny ainy (anisan'izany ireo ankizy) tao St. Vincent taorian'ny tafio-drivotra, ary mbola misy ireo olona tsy hita popoka. Goavana ny fahasimbana nateraky ny tafio-drivotra indrindra tao amin'ny faritra Avaratry ny vondronosy. Araka ny tatitra tamin'ny fampahalalam-baovao, diboky ny rano ny Seranam-piaramanidina E.T Joshua sy ny Hopitaly Milton Cato Memorial. Tsy dia niharam-boina goavana kosa ireo mponina Grenadines
Tetezana Caratal tao Georgetown, St. Vincent.
Loza nateraky ny Tondra-drano tao Georgetown, St. Vincent.
Loza nateraky ny tondra-drano tao St. Vincent.
Trano tao Rose Bank Izay Nahafatesana Olona Dimy.
Nahazoan-dalana avy amin'i Tamiko Sabrina, Johnson Jkube James, Linus Cauzabon, Natalia Bhajan, ary Yukanka Daniel ireo sary rehetra eo ambony
Tantaran'ny Dominika farany